Ku saabsan KAIGUAN | Changzhou Kaiguan Baako Technology Co., Ltd.
Changzhou Kaiguan Baako & Technology Co., Ltd.
KAIGUAN-Baako soo saaraha wax soo saarka
12 sano oo waayo aragnimo ah warshadaha baakadaha deegaanka
Awood u lahaanshaha casriga ah ee warshadahaaga gaarka ah
Waxaan qaadanaa teknoolojiyada casriga ah ee adduunka, waxay adeegsataa qalabka ilaalinta deegaanka, waxay hal-abuureysaa tikniyoolajiyadda wax soo saarka ee alaabada cusub ee lagu keydiyo ilaalinta deegaanka.
Alaabtayada ugu waaweyn ee wax lagu soo raro waa sheer (bac toosan oo sanduuqa ku jira), cubpeainer ldpe ah, weel biyo ah oo la shiiqi karo, jeerigaar isku-laab laaban iyo mashiinnada wax lagu buuxiyo.
Maaddaama ay tahay wax soo saarkeenna cusub, bacda farxadda leh waxay ka sameysan tahay caag badan. Lakabka kore (polyamide + polyetylen) wuxuu ka ilaaliyaa oksijiinta iyo qoyaanka; cufnaanteeda iyo halabuurkeedu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran hadba baahida macmiilka ama sheyga. Lakabka gudaha (polyetylen) waa mid laastik ah una adkaysanaya jeexitaanka. Waa beddel fidsan oo lagu beddelo baakadaha dareeraha ah ee soo jireenka ah, iyada oo la siinayo faa'iidooyinka weel adag iyo joogtaynta dabacsan ee ku saabsan shuruudaha gaadiidka iyo kaydinta. Waxay keydin doontaa ilaa 80-90% awoodda bakhaarka oo ay weheliso hoos u dhigid la mid ah kharashaadka gaadiidka gudaha iyo keydinta qiiqa CO2.
Sanduuqa ayaa qaab loogu talagalay. Maaddaama ay ka samaysan tahay kartoon, dhammaan dhinacyada waa la daabacan karaa, taas oo siinaysa aag dusha sare ee isgaarsiinta.
Shirkadeena waxay si adag gacanta ugu haysaa xiriir kasta oo ka mid ah tayada wax soo saarka bilowga hore. waxaan ku raad-joognaa xiriir muddo-dheer ah oo xasilloon oo iskaashi lala yeesho macaamiisha, waxaan u hurnaa dadaallada lagu doonayo in shirkadda looga dhigo horumar muddo-dheer ah
Anaga oo leh aragti furan oo daacad ah, waxaan rajeyneynaa dhamaan asxaabta inay xiriir iyo baaris ku yeeshaan shirkadeena, siinta macluumaadka ay u baahan yihiin iyo ka caawinta xalinta dhibaatooyinka naqshada.
Waxaan rajeyneynaa inaan dhisno iskaashi muddo-dheer ah dhammaan isticmaaleyaasha mustaqbal weyn！
Xulo Kaiguan, dooro tayo!
Kaiguan-si guul leh ayuu uga qeyb galay bandhigga!
Maxay macaamiisheena dhahaan？
Baahida iyo soo-jeedinta Macaamiilku waa awooddeenna wadista, qancinta macaamiisha ayaa ah baacsigeenna.
Waxaan hadda rajeyneynaa iskaashi ballaaran oo aan la yeelano macaamiisha dibedda ku saleysan faa'iidooyinka la wadaago.